VACC35000 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်ကို တစ်နာရီတွင် ၃၅၀၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်နံပါတ် ၂၅၀၉၆၉ တရားဝင်လက်မှတ်ရရှိထားပါတယ်။
မော်ဒယ်- VACC 35000
အမြိုးအစားခှဲခွားထားသောနရော: ရေစစ်ထုတ်သောလိုင်း ,	RO-VACC-mm ,	Hot
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: VACC35000
VACC35000 35000LPH Purified water filtration system is one of the best water filtration products in the market currently.
VACC35000 35000LPH ရေစစ်ထုတ်ကိရိယာက ယနေ့ဈေးကွက်မှာ အကောင်းဆုံး ရေစစ်ကိရိယာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Members of Viet An Company Viet An ကုမ္ပဏီမှ အဖွဲ့ဝင်များ
With the application of advanced technology, reasonable and competitive prices, the product has been widely chosen by the customers and help Viet An become “the best-seller” of the industrial RO filtration system in Viet Nam.
To know more details about the product as well as its outstanding benefits, just go through the below article.
ခေတ်မီတဲ့ ဒီဇိုင်း၊ ချိုသာသော ဈေးနှုန်းတို့ကြောင့် ဝယ်ယူသူတွေရဲ့ အများဆုံးရွေးချယ်မှု ခံရပြီး Viet An က ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာ အကောင်းဆုံး ရေစစ်ထုတ်ကိရိယာတွေ ရောင်းချသူ ဖြစ်လာပါတယ်။
ပိုမိုသိရှိဖို့ အောက်က ဆောင်းပါးကို အချိန်ပေးပြီး ဖတ်စေချင်ပါတယ်။
What types of water can be filtered with the VACC35000 35000LPH Purified water filtration system?
VACC35000 35000LPH ရေစစ်ထုတ်စနစ်နဲ့ ဘယ်လိုရေမျိုးကို စစ်ထုတ်နိုင်သလဲ?
Nowadays, the water pollution situation where the water is contaminated with salt, heavy metals, iron, and alum is increasingly common.
ယနေ့ခေတ်မှာ ဆားတွေ၊ ကြီးမားသော သတ္တုတွေ၊ အိုင်းယွန်း၊ ကျောက်ချဉ် စတာတွေ ပျော်ဝင်နေတဲ့ ညစ်ပတ်သောရေတွေ များပြားလာပါတယ်။
+ Alum isadouble salt of Fe2 (SO4)3and the sulfate salt of the alkali metal or ammonium metal. In its pure form, iron alum is colorless crystals, soluble in water but often purple in color because of manganese contained.
+ကျောက်ချဉ်က Fe2(SO4)3 ရဲ့ ဆားနှစ်ဆဖြစ်ပြီး အယ်လ်ကာလီနဲ့ အမိုနီယမ်တို့ရဲ့ ဆာလဖိတ်ဆားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သန့်စင်တဲ့ ပုံစံမှာဆိုရင် အိုင်ယွန်းကျောက်ချဉ်က အရောင်မဲ့ဖြစ်ပြီး ရေမှာ ပျော်ဝင်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း အများအားဖြင့်တော့ မဂ္ဂနီဆီယမ်ပါဝင်တာဖြစ်လို့ ခရမ်းရောင်ရှိပါတယ်။
+ The typical alum contamination water includes well water, groundwater. This type of water usually hasayellow color,aslightly sour taste, andafishy smell. It will be extremely dangerous if the alum is not completely removed from the water before supplying the water to the VACC35000 Mechanical Composite valve bottled water filtration system for processing.
+ကျောက်ချဉ်ပါတဲ့ ရေတွေကတော့ တွင်းရေ မြေအောက်ရေတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုရေမျိုးက အဝါရောင်ရှိပြီး နဲနဲချဉ်တဲ့ အရသာရှိကာ ငါးညှီနံ့ ရပါတယ်။ ရေကို VACC35000 စက်ဆီ မပို့ခင် ရေထဲက ကျောက်ချဉ်တွေကို အကုန်မဖယ်ထုတ်နိုင်ရင် အရမ်းအန္တရာယ်များပါတယ်။
The components of the machine will remain stain, sludge, and corrosion of they are penetrated by this polluted water.
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် စက်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေက စွန်းထင်းပြီး ပျက်စီးတတ်လို့ပါ။
+ The alum contaminated water often hasahigh acidic level and dries the skin, causing intestinal diseases, even cancer.
+ကျောက်ချဉ်ပါတဲ့ရေက အက်ဆစ်လယ်ဘယ်မြင့်တက်ပြီး အသားအရေ ခမ်းခြောက်စေကာ အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါတွေနဲ့ ကင်ဆာတောင် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
The price is not too high compared to other water filtration products of the same capacity.
အခြား အမျိုးအစားတူ စက်တွေနဲ့ယှဉ်ရင် ဈေးနှုန်းလည်း သိပ်မကွာပါဘူး။
Despite its Composite constitution, the machine hasalong shelf life of up to above 10 years.
ဒီစက်က် ၁၀ နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အထိ အထားသိုခံပါတယ်။
On average, you only need to change the filter cartridge once per year,
ပျမ်းမျှအားဖြင့် တစ်နှစ်မှာ ရေစစ်ထုတ်ကိရိယာတောင့်ကို တစ်ကြိမ်သာ လဲပေးဖို့ လိုပါတယ်။
All the components are made from high-quality material, preventing the water from being contaminated with harmful substances.
ပါဝင်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေ အားလုံးကို ရေထဲတွင် အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေ မပါဝင်လာအောင် အရည်အသွေးမြင့် ပစ္စည်းတွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။
The composite water filtration system weighs around 2,400kgs.
It consumes only 32.74kgs of electricity per operational hour.
စုပေါင်း ရေစစ်ထုတ်စနစ်က ၂၄၀၀ ကီလိုဂရမ်လောက် လေးပါတယ်။ တစ်နာရီမှာ ၃၂.၇၄ ကီလိုဂရမ် လျှပ်စစ်သာ စားပါတယ်။
In addition, this product can be used in combination with the filling system to savearemarkable labor cost.
ဒီစက်ကို အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်သက်သာအောင် လောင်းဖြည့်ပေးတဲ့စက်နဲ့လည်း တွဲသုံးလို့ ရပါတယ်။
The combination of the water filtration system and the bottle filling system will help to ensure the water quality, satisfying quality standards set by the Ministry of Health.
ရေစစ်ထုတ်စနစ်နဲ့ လောင်းဖြည့်စနစ်ကို တွဲသုံးမယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနရဲ့ စံချိန်စံနှုန်းတွေနဲ့ ကိုက်ညီစေပါတယ်။
The investment capital is not too high. You can recover the capital after just 1-2 years of operation.
အရင်းအနှီးလည်း သိပ်မလိုပါဘူး။ ၁ နှစ် ၂ နှစ်အတွင်းမှာ အရင်းပြန်ရနိုင်ပါတယ်။
Advanced RO membrane system
ခေတ်မီသော RO အလွှာပါးစနစ်
This product uses the RO membrane system in combination with the materials such as gravel, sand, and activated carbon to remove all impurities and bacteria from the water The filtered impurity sizes vary depending on the design of each filter cartridge.
ဒီစက်က ရေမှ အညစ်အကြေးတွေ၊ ဘက်တီးရီးယားတွေကို ဖယ်ရှားဖို့ ကျောက်စရစ်၊ သဲနဲ့ ကာဗွန်တွေနဲ့ တွဲသုံးဖို့ RO အလွှာပါးစနစ်ကို သုံးပါတယ်။ စစ်ထုတ်ပေးတဲ့ အညစ်အကြေး အရွယ်အစားက စစ်ထုတ်ကိရိယာတောင့်အပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။
The RO membrane system of this product is improved to bring the best filtration efficiency. RO technology is the most advanced technology currently. The filter slot size is designed similarly to the human kidney at 0.0001 micrometers, which is even tinier thanabacteria’s size. This helps to remove up to 99% of the bacteria and produce pure water with the best quality.
ဒီစက်ရဲ့ RO အလွှာပါးစနစ်ကို အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်အောင် ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ RO အလွှာပါးစနစ်က ယနေ့ခေတ်ရဲ့ ခေတ်အမီဆုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ထုတ်ပေးတဲ့ အရွယ်အစားက လူတွေရဲ့ ကျောက်ကပ်အရွယ်အစားလောက် ၀.၀၀၀၁ မိုက်ခရိုမီတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက ဘက်တီးရီးယားထက် ပိုသေးပါတယ်။ ဒါက ဘက်တီးရီးယားတွေကို ၉၉% ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီး အကောင်းဆုံး အရည်အသွေးရှိတဲ့ ရေသန့်ကို ထုတ်လုပ်နိုင်မှာပါ။
Are you searching for prices of the water filtration systems with the capacities ranging from 150l/h to 70,000l/h? Just go to https://vietan.vn/day-chuyen-loc-nuoc for detailed information. At this site, you will find not only pure water filtration systems but also electrolyte and mineral water filtration systems.
လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း မတူညီတဲ့ ရေစစ်ထုတ်ကိရိယာတွေရဲ့ ဈေးနှုန်းတွေကို သိချင်ရင် https://vietan.vn/day-chuyen-loc-nuoc မှာ ဝင်ရောက်လေ့လာလိုက်ပါ။ ဒီဝက်ဆိုက်မှာ ရေသန့်စစ်ထုတ် ကိရိယာတွေအပြင် လျှပ်လိုက်ရည်၊ စမ်းရေ စစ်ထုတ်ကိရိယာတွေကိုပါ တွေ့ရမှာပါ။
1 Push pump with 304 Stainless steelhead စတိန်းလက်စ်စတီးခေါင်းပါသော တွန်းအားရေစုပ်စက်2pc Ebara/ Pentax-Italy
2 Air disinfection lamp လေပိုးသတ်ထားသောမီးအိမ် 30 pc VA/ USApec
3 Air disinfection lamp hanger လေပိုးသတ်ထားသောမီးအိမ်ထည့်ထားသည့်ရံ 30 pc VA/ USApec
4 Composite tank စုပေါင်းတိုင်ကီ2pc VA/ USApec
73gate valve ၃ ဂိတ်အဆို့2pc VA/ USApec
8 Composite tank စုပေါင်းတိုင်ကီ2pc VA/ USApec
93gate valve ၃ ဂိတ်အဆို့2pc VA/ USApec
11 Composite tank စုပေါင်းတိုင်ကီ2pc VA/ USApec
12 Auto valve အော်တိုအဆို့2pc VA/ USApec
14 40 Filter Cartridge ၄၀ စစ်ထုတ်ကိရိယာတောင့် 20 pc VA/ USApec
16 Multi-Stage Booster pump system အဆင့်များစွာပါသော အားပြင်းရေစုပ်စနစ်2pc Ebara/ Pentax-Italy
17 Membrane housing အလွှာပါးအိမ် 10 pc VA/ USApec
18 RO membrane RO အလွှာပါး 20 pc Hitech-USA/CSM Korea
22 Copper solenoid valve ကြေးနီသံလိုက်အစို့2pc Cn Korea
25 UV lamp UV မီးအိမ် 8 pc Poland/ Hungary/ USA
26 Ozone machine အိုဇုမ်းစက် 12 pc VA/ USApec
27 Industrial filter housing စစ်ထုတ်ကိရိယာအိမ်5pc VA/ USApec
28 Bacterial filter Cartridge ဘက်တီးရီးယား စစ်ထုတ်ကိရိယာတောင့် 35 pc VA/ USApec
Hỏi đáp & đánh giá VACC 35000 35000LPH ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်